မွေးနေ့မတိုင်ခင် Surprise တိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ | Duwun
ထာဝရနှောင်းကြိုး အတွက်တော့ အမှတ်တရတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါပြီ။
ခရစ္စတီးနားခီတစ်ယောက် မွေးနေ့မရောက်ခင် တစ်လအကြို Surprise တိုက်ခံလိုက်ရပါပြီ။ သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီး ‘’ထာဝရနှောင်ကြိုး’’ကို မွေးနေ့မှာ ရုံတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီကတော့ အောက်တိုဘာလမှာ ကျရောက်မယ့် မွေးနေ့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေပါတယ်။ မွေးနေ့ မတိုင်ခင် ကြိုပြီး Surprise လုပ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ဝမ်းသာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘’ရုံရှင်တချို့အစ်မတို့က ဘာလို့ အောက်တိုဘာမှ အောက်တိုဘာဖြစ်နေရတာလဲ အိနြေ္ဒ။ မ ခရစ္စကတော့ ဘယ်လိုစိတ်ရှိမယ်မသိဘူး။ အစ်မကတော့ အောက်တိုဘာလထဲမှာပြကိုပြချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မခရစ္စမွေးနေ့ ရှိလို့။ ကြားကြားချင်း ဘာမှ ပြန်မပြောလိုက်ပေမယ့် ယောင်္ကျားကို ပြန်ပြောမိတယ်။ She is sooooo sweet လို့ Khin Eindere, Production designer ကလည်း အမမွေးနေ့မှာပြချင်တယ်လို့ မနေ့ကပြောလာတယ်’’ လို့ အစပျိုးရင်း စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
‘’ထာဝရနှောင်ကြိုး’’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို မကြာခင် ရုံတင်ပြသနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း ခရစ္စတီးနားခီက ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘’ မွေးနေ့တွေ ဘယ်တုန်းကမှ အရေးမစိုက်ခဲ့ ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလနဲ့ ယောင်္ကျား ရေးခဲ့တဲ့ Now&Ever ကိုတော့ kind of excited!! What do you all think?? P.S. Oct. 10th အထိ တခြား ရုပ်ရှင် ရုံရက်ထွက်ပြီးသာပါနော်’’ လို့လည်း ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ခရစ္စတီးနားခီ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ‘’ထာဝရနှောင်ကြိုး’’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ ရုံတင်ပြသနိုင်ဖို့အတွက် ဆင်ဆာကျပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းမှာ စတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီ၊ ပိုင်ဖြိုးသု တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အဲဒီနောက် ခင်သဇင်၊ ဂျူးဂျူးကေ၊ မြင်စိုင်းသားအောင်အောင်၊ ရဲနောင်ချို၊ မင်းညို၊ ဇူးဇူးဟန်နီထွေးတို့က ပါဝင်အားဖြည့် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ခရစ္စတီးနားခီကိုတော့ ‘’ဥပါယ်တံမျဉ်’’ ရုပ်ရှင်ကားကြီးရဲ့ ပုံဖော်သူ ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်တွေ စတင်သိရှိခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ‘’မုုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ’’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရုံတင်ပြသပြီးချိန်မှာတော့ အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်အဖြစ်သာမက မြန်မာအက ကိုလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကပြနိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။